Tarsan: Alshabaab Iyo Qoysaskoodu Dhumaaleysi Ugama Dhoofi Doonaan Garoonka Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, Mareeg.com: Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) ayaa sheegay in qalab cusub oo la keenay caasimadda iyo qaadashada warqadda dhalashada iyo kaarka aqoonsiga ay Alshabaab iyo qoysaskooda ka horjoogsan doonaan iney si qarssoodi ah uga dhoofaan garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Wuxuu sheegay guddoomiyaha gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur in goob walba oo laga dhoofo ama laga qaato warqadaha sharciga ah sida baasaboorka la dhigay kambiyuutarro laga heli karo warbixinta qofka oo dhameystiran.
“Qofku hadduu goosto baasaboor, kambiyuutarradu waxay aqbali karaan oo keliya farahii qofkaas uu markii hore saaray, haddii qof kale uu farahiisa saaro kambiyuutarku wuu diidayaa, mana ahan wax la been abuuri karo,” ayuu yiri9 Tarsan oo la hadlay BBC.
Tarsan ayaa qiray in saraakiil ka tirsan Alshabaab iyo qoysaskooda ay horay si dhuumaaleysi ah uga dhoofi jireen garoonka Muqdisho, wuxuuna sheegay in wixii hadda ka dambeeya arrintaas aysan u socon doonin.
“Arrintaas waxaan u sameysay si aan ku ogaanno xaasaska, caruurta iyo hoggaamiyeyaasha Al-shabaab oo iyagoo aan la ogeyn ka dhoofi jiray groonka diyaaradaha Muqdisho,” yiri sidoo kale yiri Tarsan.
Tarsan ayaa dhanka kale sheegay in haddii qof ka tirsan Al-shabaab ay helaan ay ka qaadi doonaan dheecaanka DNA-da loo yaqaan ee qofka jinsigiis lagu ogaado, waxaana hadalka duqa Muqdisho Tarsan kusoo beegmay xilli uu shaqo galay xafiiska Dad Dhiga Dowladda Hoose ee Muqdisho oo laga bixiyo waraaqaha dhalashada iyo kaararka aqoonisga muwaadinimo.